Malunga nathi-JINHUA ZHONGSHENG FIBER COS CO, Ltd.
MaUkwenza izinto ezilungileyo kakhulu emhlabeni ze-eco ukusukela ngo-2007
Senza iimveliso zethu ngokusebenzisa ibhegi yeswekile engasetyenziswayo kwaye siyilungiselele ukuba zikwazi ukuthengisa inkunkuma yokutya, apho yamkelweyo. Iicompost ziyisisombululo esisebenzayo sokulahlwa kokutya okunesifo esinye, sivumele ukutya kwenkonzo ukuba kufezekise iinjongo zazo zokuzinza.
————————— Imveliso yethu —————————
Sisebenzisa umoba njengengca eluhlaza njengokwenza izinto zethu.
Kwifom yayo egqityiweyo, Iimveliso ze-ZZ ECO zixhomekeke kumacandelo ezentengiso, apho zamkelwe.
————————— Imveliso —————————
Emva kokujonga ngokungqongqo kwezinto eziluhlaza, ngokusebenzisa iinkqubo ezahlukeneyo, ukulawula umgangatho wemveliso, siya kuhambisa iimveliso kubathengi.
————————— Ukwenza umgquba —————————
Iqela lethu lizibophelele ekuboneleleni abathengi ngezisombululo eziluhlaza, kwaye ukukhonza abathengi kuyinjongo yethu. Iimveliso zeZZ Eco ziya kukuzisela lula, kwaye iya kuba kokona kulungileyo. Ukudala imeko eluhlaza luxanduva lomntu wonke. Masikhethe le mveliso eluhlaza kwaye senze umhlaba ongcono.
————————— Izatifikethi —————————
————————— Imbali yethu —————————
IJinhua zhongsheng Fiber Products Co, Ltd lishishini lokuvelisa elidibanisa iphepha lemveliso yokuhambisa umatshini kunye nokuthengisa kunye noyilo loyilo kunye nophuhliso luphela. Ukudalwa kwephepha okwenziwe yindawo yokubumba kunye eshushu esinyanzelayo siyenza ifanelekile kwiindidi ezahlukeneyo zobuchule kunye noomatshini beendlela ezahlukeneyo zokufudumeza (ukufudumeza ngombane, ukufudumeza umsi, ukufudumeza ioli yokufudumeza). Sikhokela kuphando nasekuveliseni iphepha leepulpiti ekubuseni kwegesi okanye ngeoli. Obu buchwephesha bonga amandla buchazwe ngokubanzi kwaye busetyenziswa ekhaya nakumazwe aphesheya.
Ukufumana amandla okwenza izinto ngokuphuculwa kwezixhobo, ukuzuza ukuthembela kwabathengi ngomgangatho ozinzileyo. Sisoloko silawula umgangatho weemveliso ngokungqongqo ngokomgangatho we-BRC (sinezatifikethi ze-BRC, NSF, KULUNGILE KAKHULU, BSCI, FDA, njlnjl, kwaye senza konke okusemandleni ethu ukufezekisa iimfuno zomthengi ngamnye wemisebenzi, uyilo lobume, ubuchule beplp kunye nokunye iinkalo. Ngoku iimveliso zethu zithengiswa kwihlabathi liphela.
Ngokuhambelana nomthengi njengeziko, abasebenzi njengobutyebi, iqela lethu lihlala lihlaziya izixhobo zoomatshini, izinto ezintsha kunye nophumculo. Iqela leZhongsheng lizibophelele ekubeni lishishini lokulinganisa kwimveliso yokuumba.